လူပွောမြားနတေဲ့ ကိုးတနျး ကြောငျးသူ မိနျးကလေး ၅ ယောကျဖွဈရပျ - Update News
ထမငျးစားခြိနျဆိုငျသှားဖို ဖွတျလမျးကွားကနအေဖွတျ ကိုးတနျးကလေးမိနျးကလေးငါးယောကျကို တယောကျစီကောငျလေးလေးငါးယောကျလောကျကတှဲပီး လမျးလြောကျလာကွတာတာတှလေိုကျတယျ မိနျးကလေးတှခွေလှေမျးကယိမျးယိုငျနပေီးတော့ လမျးတောငျကောငျးကောငျးမလြောကျနိုငျကွတော့ဘူး မိနျးကလေးတယောကျဆိုအကြီကွယျသီးပါပွုတျနတေယျ
သူတိုကိုဘာဖွဈတာလဲလိုလှမျးမေးတော့ ကောငျလေးတဈယောကျကအစာအဆိပျသငျ့တာပါလို လှယျလှယျလှမျးပွောပီး သူတိုကဆကျသှားကွပမေဲ့ စိတျထဲစိတျမခဖြွဈတာနဲကားကိုဘေးခရြပျပီး သူတိုနောကျကိုယျတှရေုံးကအဖှဲလေးယောကျလိုကျကွတာ လမျးလုံးဝမလြောကျနိုငျတဲ့ကောငျမလေးတဈယောကျကကနျြခဲ့ပီး ကနျြတဲ့ ကလေးတှကေထှကျပွေးကွတော့တယျ
ကနျြခဲ့တဲ့ကောငျမလေးကိုသခြောမေး အရှရေောကျနတေဲ့အဖှဲ့ကို ရပျကှကျကလူကွီးတှကေိုတားထားကွပါလို လှမျးအျောပွောလိုကျတော့မှ သူတိုအားလုံးတဈစုတဈစညျးထဲတှရေတော့တယျ ကောငျမလေးတဈယောကျဆို မတျတပျတောငျမရပျနိုငျတော့ပဲ လမျးပျေါထိုငျခပြီးသမီးတု.ိကိုမဆှဲနဲ. ကိုယျ့ဘာသာသှားနိုငျတယျလိုအျောနတောနဲ တဈခကျြလောကျနငျတိတျတိတျနစေမျးလု.ိလှမျးဟောကျလိုကျမှ ခဏငွိမျသှားလရေဲ
( ခဏပဲငွိမျတာနျော ) အနားကပျလိုကျမှအရကျနံတှတေျောတျောထှကျနတော တှဲပေးတဲ့ကောငျလေးငယျငယျလေးရယျ မူးနတေဲ့မိနျးကလေးငယျငယျလေး ရယျ ကြောငျးစိမျးဝတျစုံနဲ လုံးထှေးမတတျလမျးမှာတှရေတာ တျောတျောအမွငျမတျောဖွဈရပါတယျ ဒီလိုအနာဂါတျအတှကျအားတှဖွေဈလာမဲ့လူငယျလေးတှဟော အရှယျမရောကျခငျမှာပဲဒီလိုကိစ်စတှကွေောငျ့ လမျးဘေးကိုဘယျနှဈယောကျမြားရောကျနကွေပီးပီလဲ
တှေးကွညျရငျတျောတျောစိတျမကောငျးဖွဈရပါတယျ ဒါနဲသူတိုကိုမိဘတှဖေုနျးနံပါတျဖွဈဖွဈစုံစမျးမမွေနျးတော့ ဘာမှမပွောပဲအိမျမပွနျဘူးနျောအိမျမပွနျဘူးနျောနဲပဲ တှငျတှငျအျောနတေော့တာပဲ ဒါနဲကောငျလေးတှကေိုကြောငျးနာမညျမေးပီး လမျးမှာတှတေဲ့ကားကွီးတဈစီးကို ( ကိုယျ့ကားကသေးတော့မဆံ့ဘူး )အကြိုး အကွောငျးရှငျးပွပီး အကူအညီတောငျးပီးကြောငျးကိုသာပိုခိုငျးလိုကျရပါတော့တယျ
မပိုခငျမှာလဲညီမလေးတိုကိုဆူမှမဟုတျကွောငျးနဲ အရှယျမရောကျသေးတဲ့ကလေး ဒီတိုငျးလမျးမှာ လြောကျသှားနဖေိုမသငျ့လိုသာ ကြောငျးကိုပိုပီးကြောငျးကမှတဈဆငျ့ဖွဈသငျ့တာဆကျလုပျမှာဖွဈကွောငျး သူတိုနားဝငျအောငျရှငျးပွလိုကျပါတယျ
သူတိုသှားပီးအပွနျလမျးကမြှ သူတိုကြောငျးကဆရာမတဈယောကျကိုတှတေော့ထပျမှာလိုကျပါတယျ မဆူဖိုနဲသူတိုမှာစိတျညဈစရာအိမျမှာပဲဖွဈဖွဈ ကြောငျးမှာပဲ ဖွဈဖွဈဘာအခကျအခဲမြားရှိလဲ သခြောဆှေးနှေးတိုငျပငျလမျးညှနျပေးဖို ဆရာမကိုပွောပမေဲ့ဆရာမကလဲ ဒီဘီအတနျးကကလေးတှဆေိုးကိုဆိုးတာခညျြးပဲ တှငျတှငျပွောနပေါတော့တယျ
၁. ဆရာမဆူမယျ အဆိုးဆုံးကြောငျးထုတျမယျ
၂. ဆူတော့ထပျစိတျညဈပီးထပျဆိုးသှမျးမယျ ကြောငျးထုတျရငျဘဝပကျြမယျ
၄. သူတိုဘဝတဈခုလုံးအတှကျအသုံးခဖြို. ပညာသငျကွားဖိုဆိုတဲ့အခှငျ့အရေးတှဆေုံးရှုံးသှားမယျ
နောကျသူတိုသောကျဖို.အရကျကို ဘယျသူရောငျးလိုကျတာလဲ ရောငျးရငျရောငျးလိုကျတဲ့ဆိုငျထိအရေးယူရပါမယျ ကိုယျပိုကျဆံရပီးရော ဖွဈခငျြတာဖွဈမစဉျးစားပဲ ရောငျးလိုကျတာမြိုးမဖွဈသငျ့ဘူးလေ နောကျဒီကလေးတှကေိုယျနဲမတှပေဲ အိမျလဲမပွနျခငျြတော့အဆိုးဆုံး တညျးခိုခနျးရောကျသှားကွတယျထား အရှယျကိုထညျမစဉျးစားတညျးဖိုလကျခံတဲ့ ပိုကျဆံတဈခုပဲကွညျတဲ့နရောမြိုးရှိနအေုံးမှာပါပဲ အမှနျဆိုကောငျးမှနျတဲ့လူအဖှဲအစညျးဆိုတဲ့နရောမှာ ကိစတခုအဆိုးပဲဖွဈဖွဈ အကောငျး ပဲဖွဈဖွဈဖွဈလာဖိုက အားလုံးကဆကျစပျနကွေတာပါ အားလုံးမှာ တာဝနျရှိပါတယျ
၆. ဒီလိုအဖကျဖကျက ဖွဈလာတဲ့အကွောငျးတရားတှကွေောငျ့ ဒီလိုအဖွဈဆိုးကိုဖွဈလာတာပါကောငျးလာဖို. တဈဖကျလှညျပွနျတှေးကွညျရငျ အရကျဆိုငျကမရောငျးရငျသူတိုသူငယျခငျြးတှကေတားရငျ ဆရာဆရာမတှကေတပညျရဲအရိပျအခကြေို ဆူပူရုံတငျမဟုတျပဲသူတို အခကျအခဲကိုပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဆှေးနှေး ကာကှယျ နိုငျစှမျးရှိတဲ့ကြောငျပတျဝနျးကငျြဖွဈရငျ မိဘကလဲသားသမီးကိုစဉျဆကျမပွတျ အမွဲထိနျးသိမျးပီးကြောငျးပွေးပီး အပွဈလုပျမိတဲ့အထိမဖွဈသငျ့တဲ့ စဉျးစားနိုငျစှမျးလေးသာသားသမီးတှေ ရငျထဲထညျပေးနိုငျရငျ ကလေးကိုယျတိုငျကကိုကဒီလိုမလူပျပဲ စာသာကွိုးစားခဲ့ရငျအဲ့လိုအတှေးတှနေဲပဲ သကျပွငျးတဈခကျြအကွီးကွီးခမြိခဲ့ပါတော့တယျ
credit-Ei Pwint Phyu
ထမင်းစားချိန်ဆိုင်သွားဖိုဖြတ်လမ်းကြားကနေအဖြတ် ကိုးတန်းကလေးမိန်းကလေးငါးယောက်ကို တယောက်စီကောင်လေးလေးငါးယောက်လောက်ကတွဲပီး လမ်းလျောက်လာကြတာတာတွေလိုက်တယ်
မိန်းကလေးတွေခြေလှမ်းကယိမ်းယိုင်နေပီးတော့ လမ်းတောင်ကောင်းကောင်းမလျောက်နိုင်ကြတော့ဘူး မိန်းကေလးတယောက်ဆိုအကျီကြယ်သီးပါပြုတ်နေတယ်
သူတိုကိုဘာဖြစ်တာလဲလိုလှမ်းမေးတော့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကအစာအဆိပ်သင့်တာပါလို လွယ်လွယ်လှမ်းပြောပီးသူတိုကဆက်သွားကြပေမဲ့ စိတ်ထဲစိတ်မချဖြစ်တာနဲကားကိုဘေးချရပ်ပီး သူတိုနောက်ကိုယ်တွေရုံးကအဖွဲလေးယောက်လိုက်ကြတာ လမ်းလုံးဝမလျောက်နိုင်တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကကျန်ခဲ့ပီး ကျန်တဲ့ ကလေးတွေကထွက်ပြေးကြတော့တယ် …..
ကျန်ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးကိုသေချာမေး အရှေရောက်နေတဲ့အဖွဲ့ကိုရပ်ကွက်ကလူကြီးတွေကို တားထားကြပါလိုလှမ်းအော်ပြောလိုက်တော့မှ သူတိုအားလုံးတစ်စုတစ်စည်းထဲတွေရတော့တယ်
ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဆို မတ်တပ်တောင်မရပ်နိုင်တော့ပဲ လမ်းပေါ်ထိုင်ချပီးသမီးတု.ိကိုမဆွဲနဲ. ကိုယ့်ဘာသာသွားနိုင်တယ်လိုအော်နေတာနဲ တစ်ချက်လောက် နင်တိတ်တိတ်နေစမ်းလု.ိလှမ်းဟောက်လိုက်မှ ခဏငြိမ်သွားလေရဲ
( ခဏပဲငြိမ်တာနော် ) အနားကပ်လိုက်မှအရက်နံတွေတော်တော်ထွက်နေတာ တွဲပေးတဲ့ကောင်လေးငယ်ငယ်လေးရယ် မူးနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ငယ်လေး ရယ် ကျောင်းစိမ်းဝတ်စုံနဲ လုံးထွေးမတတ်လမ်းမှာတွေရတာ တော်တော်အမြင်မတော်ဖြစ်ရပါတယ် ဒီလိုအနာဂါတ်အတွက် အားတွေဖြစ်လာမဲ့လူငယ်လေးတွေဟာ အရွယ်မရောက်ခင်မှာပဲဒီလိုကိစ္စတွေကြောင့် လမ်းဘေးကိုဘယ်နှစ်ယောက်များရောက်နေကြပီးပီလဲ
တွေးကြည်ရင်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ် ဒါနဲသူတိုကိုမိဘတွေဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ဖြစ်စုံစမ်းမေမြန်းတော့ ဘာမှမပြောပဲအိမ်မပြန်ဘူးနော်အိမ်မပြန်ဘူးနော်နဲပဲ တွင်တွင်အော်နေတော့တာပဲ ဒါနဲကောင်လေးတွေကိုကျောင်းနာမည်မေးပီး လမ်းမှာတွေတဲ့ကားကြီးတစ်စီးကို ( ကိုယ့်ကားကသေးတော့မဆံ့ဘူး )အကျိုး အကြောင်းရှင်းပြပီး အကူအညီတောင်းပီးကျောင်းကိုသာပိုခိုင်းလိုက်ရပါတော့တယ်
မပိုခင်မှာလဲညီမလေးတိုကိုဆူမှမဟုတ်ကြောင်းနဲ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေး ဒီတိုင်းလမ်းမှာ လျောက်သွားနေဖိုမသင့်လိုသာ ကျောင်းကိုပိုပီးကျောင်းကမှတစ်ဆင့်ဖြစ်သင့်တာဆက်လုပ်မှာဖြစ်ကြောင်း သူတိုနားဝင်အောင်ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်
သူတိုသွားပီးအပြန်လမ်းကျမှ သူတိုကျောင်းကဆရာမတစ်ယောက်ကိုတွေတော့ထပ်မှာလိုက်ပါတယ် မဆူဖိုနဲသူတိုမှာစိတ်ညစ်စရာအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျောင်းမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ဘာအခက်အခဲများရှိလဲ သေချာဆွေးနွေးတိုင်ပင်လမ်းညွန်ပေးဖို ဆရာမကိုပြောပေမဲ့ဆရာမကလဲ ဒီဘီအတန်းကကလေးတွေဆိုးကိုဆိုးတာချည်းပဲ တွင်တွင်ပြောနေပါတော့တယ်
၁. ဆရာမဆူမယ် အဆိုးဆုံးကျောင်းထုတ်မယ်
၂. ဆူတော့ထပ်စိတ်ညစ်ပီးထပ်ဆိုးသွမ်းမယ် ကျောင်းထုတ်ရင်ဘဝပျက်မယ်
၄. သူတိုဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်အသုံးချဖို. ပညာသင်ကြားဖိုဆိုတဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးသွားမယ်
နောက်သူတိုသောက်ဖို.အရက်ကို ဘယ်သူရောင်းလိုက်တာလဲ ရောင်းရင်ရောင်းလိုက်တဲ့ဆိုင်ထိအရေးယူရပါမယ် ကိုယ်ပိုက်ဆံရပီးရော ဖြစ်ချင်တာဖြစ်မစဉ်းစားပဲ ရောင်းလိုက်တာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလေ နောက်ဒီကလေးတွေကိုယ်နဲမတွေပဲ အိမ်လဲမပြန်ချင်တော့အဆိုးဆုံး တည်းခိုခန်းရောက်သွားကြတယ်ထား အရွယ်ကိုထည်မစဉ်းစားတည်းဖိုလက်ခံတဲ့ ပိုက်ဆံတစ်ခုပဲကြည်တဲ့နေရာမျိုးရှိနေအုံးမှာပါပဲ အမှန်ဆိုကောင်းမွန်တဲ့လူအဖွဲအစည်းဆိုတဲ့နေရာမှာ ကိစတခုအဆိုးပဲဖြစ်ဖြစ် အကောင်း ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာဖိုက အားလုံးကဆက်စပ်နေကြတာပါ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်
၆. ဒီလိုအဖက်ဖက်က ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့် ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးကိုဖြစ်လာတာပါကောင်းလာဖို. တစ်ဖက်လှည်ပြန်တွေးကြည်ရင် အရက်ဆိုင်ကမရောင်းရင်သူတိုသူငယ်ချင်းတွေကတားရင် ဆရာဆရာမတွေကတပည်ရဲအရိပ်အချေကို ဆူပူရုံတင်မဟုတ်ပဲသူတို အခက်အခဲကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေး ကာကွယ် နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကျောင်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရင် မိဘကလဲသားသမီးကိုစဉ်ဆက်မပြတ် အမြဲထိန်းသိမ်းပီးကျောင်းပြေးပီး အပြစ်လုပ်မိတဲ့အထိမဖြစ်သင့်တဲ့ စဉ်းစားနိုင်စွမ်းလေးသာသားသမီးတွေ ရင်ထဲထည်ပေးနိုင်ရင် ကလေးကိုယ်တိုင်ကကိုကဒီလိုမလူပ်ပဲ စာသာကြိုးစားခဲ့ရင်အဲ့လိုအတွေးတွေနဲပဲ သက်ပြင်းတစ်ချက်အကြီးကြီးချမိခဲ့ပါတော့တယ်
Previous Article ခဈြသူရှိတဲ့ကောငျလေး နဲ့ အနမျးတှပေေးနတေဲ့ ဖှေးဖှေးအကွောငျးဖျောထုတျခံရ
Next Article ကိုဗဈကွောငျ့ အထိနာခဲ့ရတဲ့ AirAsia ရဲ့ Founder အိမျထုတျရောငျး